आदर्श कम्युनिष्ट नेता बर्मन बुढाको अन्त्येष्टिः अस्तायो थबाङको घाम – Janadesh Daily | ePaper
आदर्श कम्युनिष्ट नेता बर्मन बुढाको अन्त्येष्टिः अस्तायो थबाङको घाम
July 22, 2020 July 23, 2020 by Jandesh Daily
कम्युनिष्ट नेता बर्मन बुढाको पशुपती स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
रोल्पाको थवाङ घर भएका कम्युनिष्ट नेता बुढाको ९० बर्षको उमेरमा ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालामा उपचारको क्रममा आज बिहान निधन भएको थियो ।
बुढाको विगत एक वर्षदेखि आन्द्राको क्यान्सरको उपचार हँुदै आएको थियो । पूर्व सांसद समेत रहनुभएका बुढाको अन्त्येष्टि गर्नुअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभयो । बुढा प्रति श्रद्धान्जली दिन सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्वसभामुखहरु कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्ती, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य लगायतका नेताहरु पशुपति पुग्नुभएको थियो ।
बर्मन बुढा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सरल जीवनशैली भएका व्यक्तित्वका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
बुढा २०४८ सालको निर्वाचनमा जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी हुनुभएको थियो भने उहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्धमा समेत होमिनु भएको थियो ।
Posted in जनादेश विशेष
सेयर बजारमा हरियाली, झण्डै ७५ अंकले बढ्यो नेप्से
बाबुराम र उपेन्द्रबीच सम्बन्धविच्छेदको सहमति, बाबुराम अब के गर्लान् !
ओली भेट्न बालकोट पुगे बामदेव, अन्य नेता पनि भेट्ने तयारी
बलिउड अभिनेत्री स्वरा भास्करलाई आयो ज्यान मार्ने धम्की सहितको पत्र!
बामदेवको रहरदेखि प्रचण्डको दृढतासम्मः फेरि बाम एकता वा चुनावी तालमेलको सम्भावना कति !
काठमाडौंमा बढ्दै हैजाका बिरामी, अहिलेसम्म कहाँ कहाँ भेटिए